dhoofisaa horeysay Turkey ee gaariga rail BozankayaWaxay soo saari doontaa 30% 16 trams dabaqa hoose oo qiimihiisu yahay 100 milyan oo Yuuro oo loogu talagalay magaalada Iaşi ee Romania. Gawaarida ganacsiga ee korantada iyo gawaarida tareenka ee magaalada Ankara [More ...]
Baadhitaan adag oo Gawaarida la dhigto Wadada Akçaray; Khadka tareenka Akçaray, kumanaan muwaadiniin ah ayaa si dhaqso leh oo nabad ah loogu adeego Izmit. Subaxa hore ee 05.00 [More ...]
Akçaray waxaa loo fidin doonaa Kuruçeşme iyo Şehir Hospital; Khadka tareenka ee lagu kordhiyay wadada loo yaqaan 'Beach Street' ayaa shaqeyn doona illaa Isniinta. Xariiqa cusub ee '2,2 kilomitir', oo ah halka shaqadu ku dhammaatay, raacitaanka koowaad ee Duqa Magaalada Kocaeli Assoc. Dr. Tahir [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, u adeegida iyo ardayda 'tirada xariiqda tirada' 10 'waxaa loo yaqaanaa safarka' 10'un safarada 'wuxuu u socdaa si aan kala go' lahayn. 59 oo leh hal wareeg oo wareeg ah [More ...]